Tag: njirimara | Martech Zone
Melite: M mepụtara Ngwaọrụ Sidebar iji gosipụta Ozi Chepụtara gị. Akwụkwọ nke Jon Arnold dere taa dị mma na ndụmọdụ maka ịwepụta weebụsaịtị, mana achọpụtara m na okwu izizi nyere m post ahụ. Nke ahụ bụ akara ngosi na-egosi na m kwesiri ime ka onye ode akwụkwọ mara ọkwa. Emepụtaghị m wijetị maka nke a (ọ na-eju m anya na ọ nweghị onye ọzọ nwere!), Ma enwere m ike idezi sidebar m na WordPress blog
Tinye Y! Bie na sidebar gị!
Obi dị m ezigbo ụtọ na Y! Dị ndụ - teknụzụ dị egwu! N'ihi ya, ekpebiri m ịga n'ihu tinye ya n'akụkụ m! Mgbe m na-agbasa ozi, ị ga - ahụ m ka m na - arụ ọrụ na laptọọpụ ol na aka m. Kedu ka m si mee ya? O were obere ọrụ, mana achọpụtara m ya. Nnukwu ihe mgbochi iji nweta bụ na akwụkwọ Yahoo! URL enweghị ezighi ezi iji tụọ mgbasa ozi ahụ n'ezie!